बाथरोगबाट बेलैमा सचेत हुनुस् - » खबरहरुको एउटै केन्द्र
बाथरोगबाट बेलैमा सचेत हुनुस् –
सोमबार, माघ २४, २०७३ ०८:१८ मा प्रकाशित !
साधारणतया जोर्नी दुख्ने समस्यालाई हामी बोलीचालीको भाषामा बाथ रोग भन्छौं । जोर्नी दुख्नेलाई मात्र बाथरोग भनिन्छ कि यसका अरु पाटो पनि छन् ? बाथ रोग किन हुन्छ ? यसका लक्षण के-के हुन् भन्ने प्रश्न हाम्रो मनमा उब्जिरहेको हुन्छ । रोगबारे पर्याप्त जानकारी नहुँदा हामी कतिपय अवस्थामा जसले जे भन्यो, त्यही लहैलहैमा लाग्छौं । दुखाइ निको होस् भनेर जथाभावी औषधि, धूलो, झारपात र झारफुकको पछाडि लाग्दा रोगले जटिल रुप लिइसक्छ, पत्तै हुँदैन । यसैले यो लेखमा मैले बाथरोगको लक्षण र उपचारबारे प्रकाश पारेको छ।
जोर्नी दुख्ने समस्यालाई बाथरोग भन्ने गरिए पनि अन्य लक्षणको रुपमा पनि यो रोग देखा पर्छ । कहिलेकाहीँ अन्य रोगसँग मिसिएर पनि देखा पर्न सक्छ ।बाथरोग सामान्यतया रोग प्रतिरोधात्मक प्रणाली (इम्युन सिस्टम) का कारण हुन्छ । यसले धेरैजसो शरीरको जोर्नीका साथै छाला,आँखा, दिमाग, मुटु, फोक्सो, मिर्गौला लगायतमा असर पुर्यासउँछ । ‘अउटो इम्युन‘ रोग धेरै प्रकारका हुन्छन् । रोग अनुसारका लक्षण फरक-फरक हुन्छन् ।
बाथरोगका अन्य लक्षण साधारण रुपमा हामी सबैलाई ढाड दुखेकै हुन्छ । बूढापाका मानिसमा उमेरको कारण, सामान्य मानिसमा हड्डी खिएर ढाड दुख्ने गर्छ।
तर, बाथरोगका कारण हुने ढाड दुखाइ भिन्न किसिमको हुन्छ । यस्तो दुखाइ राति बढी हुन्छ र सुतेको बेलामा ओल्टेकोल्टे फेर्न समेत गाह्रो हुन्छ । बिहान उठ्ने बेलामा हलचल गर्न समेत गाह्रो हुन्छ । केहीबेर कसरत वा काम गर्न थालेपछि भने दुखाइ कम हुन्छ । यस रोगको समयमा निदान र उपचार नभएमा रोग जटिल अवस्थामा पुग्छ र बिरामी हलचल समेत नगर्ने गरी थला पर्छन् । बाथरोगका कतिपय यस्ता बिरामीमा छालाको रोग (सोरियासिस),पातलो दिसा हुने (आईबीडी) लगायत पनि हुन सक्छ । आँखा रातो हुने, कुर्कुच्चा जोडसँग दुख्ने, एउटा औंला मात्र सुन्निने पनि हुनसक्छ । अन्य बाथरोगमा शरीरका मांसपेशी गल्ने र दुख्ने, छालामा डाबर आउने, कुर्सीमा बसेको मान्छे उठ्न नसक्ने हुने, कपाल कोर्दा समेत हात फतक्क गलेर तल झर्ने लगायत लक्षण देखिन्छन् । कतिपय बाथरोग महिलाहरुलाई बढी लाग्छ । त्यसले महिलाहरुको कपाल धेरै झर्न सक्छ । साथै, मुखभित्र घाउ आउने, मुखको छाला जाने, घाममा जाँदा अनुहार रातो हुने र पोतो आएको जस्तो हुने लगायत लक्षण देखा पर्न सक्छन् । बाथरोगका कारण टाउको अचानक दुख्ने, आँखा धमिलो हुने र आँखाको ज्योति गुम्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । यस्तै,गर्भाशयमा बच्चा नबस्ने र बसेको गर्भ पनि बारम्बार तुहिने समेत हुन्छ । अर्को प्रकारको काथमा पेट दुख्ने र दिसामा रगत आउने गर्छ । त्यसैगरी छारेरोगका जस्ता लक्षणहरु, अचानक अन्धोपना, मुख बाङ्गो हुने लगायत लक्षणहरु पनि बाथ रोगमा देखिन्छ ।
विगतमा हाम्रो देशमा बाथरोग विशेषज्ञ (रिउमाटोलोजिष्ट) को अभाव रहेकोले यसको राम्रोसँग पहिचान र उपचार हुन सकेको थिएन । धेरैजसो बिरामीहरु उपचारका लागि भारत लगायत मुलुकहरुमा जाने बाध्यता थियो । तर, केही वर्षयता यस रोगको विशेषज्ञता हासिल गरी आएका चिकित्सकहरुको उपलब्धताले स्वदेशमै बाथरोगको उपचार सम्भव भएको छ । यद्यपि विशेषज्ञ चिकित्सकहरुको संख्या कम र बिरामीहरुको संख्या धेरै भएकोले उपचारका लागि धेरै समय कुर्नुपर्ने बाध्यता समेत छ । उपलब्ध केही विशेषज्ञ चिकित्सक पनि काठमाडौंमा केन्द्रित रहेकोले राजधानी बाहिर बाथको उपचार अझै सम्भव हुन सकेको छैन । यस विषयको विशेषज्ञ चिकित्सकको संख्या बढाउन हालसम्म सरकारी तवरबाट कुनै पहल भएको छैन । बाथ रोग नसर्ने प्रकृतिको दीर्घ रोग हो । यो रोगको औषधि लामो समयसम्म वा बाँचुन्जेल सेवन गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ । धेरैजसो बाथरोग औषधि सेवन गरुन्जेल निको भए जस्तो देखिने तर औषधि छाडेपछि बल्झने हुन्छन् । बाथ रोग कतिपय अवस्थामा समयमा उपचार नपाउँदा मृत्युको कारण पनि बन्न सक्छ । बाथ रोगको परीक्षणमा गरिने ‘आउटो एन्टिबडी‘ जाँचहरु अझैसम्म सरकारी अस्पतालहरुमा नहुँदा यो आम सर्वसाधारणको पहुँचमा आउन सकेको छैन । यदि बाथरोग विशेषज्ञ चिकित्सकहरु सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने वातावरण मिलाइदिने हो भने विपन्न नागरिकले पनि सहज रुपमा उपचार पाउने थिए ।
औषधि र उपचार-
बाथरोगको उपचारमा चिकित्सकले बिरामी जाँच्नु र औषधि दिनु मात्र पर्याप्त हुँदैन । रोगको बारेमा राम्रोसँग जानकारी गराउनु र सेवन गर्ने औषधिका असरबारे बताउनु पनि चिकित्सककै दायित्व हो । हाम्रो देशमा कतिपय चिकित्सकले आत्मसम्मान घट्ला भनेर सकभर अरुकहाँ रिफर नगर्ने प्रवृत्ति छ । यसका कारण पनि बिरामीहरु पीडित हुनुपरेको छ । समयमै सम्बन्धित विशेषज्ञकहाँ रिफर गर्दा बिरामीले उचित उपचार पाउँछन् र रोगले जटिल रुप लिन पाउँदैन । बाथरोगको उपचारमा हाड–जोर्नी र छालाका समस्या मात्र निको पारेर हुँदैन । यो रोगले निम्त्याउने अन्य रोग र असरको उपचार बाथरोग विशेषज्ञबाट मात्रै सम्भव हुने भएकोले बिरामीहरु चनाखो हुनुपर्छ । बाथरोगको औषधि लामो समयसम्म सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ । औषधि कहिलेसम्म खाने, कहिले कम गर्ने र कहिले बन्द गर्ने भनेर अनिवार्य रुपमा विशेषज्ञ चिकित्सकको परामर्श लिनुपर्छ । बाथरोगका औषधिहरु ‘इम्युनोसप्रेसिभ’ (रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता घटाउने किसिमका औषधि) भएकोले बेलाबेलामा यी औषधिले पार्ने असर थाहा पाउन रगत तथा पिसाबको जाँच, एक्स रे लगायतका जाँच गर्नुपर्छ ।
PREVIOUS POST Previous post: प्रहरी हिरासत कक्षमा सिसी क्यामरा जडान-
NEXT POST Next post: government are preparing to distribute compensation amount- To build Budhi Gandaki Hydropower
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते सोमबार, माघ २४, २०७३ ०८:१८
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस सोमबार, माघ २४, २०७३ ०८:१८
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण सोमबार, माघ २४, २०७३ ०८:१८
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी सोमबार, माघ २४, २०७३ ०८:१८
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? सोमबार, माघ २४, २०७३ ०८:१८